Obama Madaxwenaha Mareykanka
Madaxweyne Barack Obama ayaa ku guuleystey tartankii doorashada ee waddanka Mareykanka isagoo sidaan horey usheegayba ku guuleystey tirada 274 electoral vote sidaana waxuu afarta sano ee soo socota ku noqonayaa madaxweynaha mareykanka.
Waxaan runtii laga dareemayaa meelo badan oo ka mid ah waddankaan farxad iyo reyn reyn weli ma uusan hadlin ha yeeshee waxaa caado u ah in musharaxa guuleysto uu u mahad celiyo musharaxa la tartamay waxuu kaloo sameeyaa ballan qaadyo,sidaasoo kale ayuu musharaxa laga guuleystona u tahniyadeeyaa musharaxa ay guushu raacdey.
Waxaa kaloo xusid mudnaa in aqalka hoose ay mar labaad ku adkaadeen xisbga Jamhuuriga iney maamulaan taasoo ay xisbiga Dimuqraadiga ay filayeen iney ku adkaadaan.
Waxaan kaloo rabaa inaan tilmaamo Gobolka aan deganahey ee Massachusetts in kursiga uu ka geeriyoodey Ted Kennedy oo isagu 2dii sano ee la soo dhaafey uu dhameystirey ninka la yiraahdo Scott Brown oo ka soo jeeda xisbiga Jamhuuriga uu caawa halkaa ku waayey oo waxaa kursigaa ku soo celiyey xisbiga Dimuqraadiga Marwo Elizabeth Warren oo bare ka ah jaamcada weyn ee la yiraahdo Harvard kursigaa ayaa mudan inaan tilmaamo inuu Ted Kennedy uu ku fadhiyey muddo ka badan 40 sano.
Mar labaad Barack Obama madaxweynaha 4ta sano ee soo socota.
Waxaa qorey: Cabdi Cawaafe oo ku guuleystey inuu noqdowariyaha North America webka Alcarab.com